Nke Series Sand Ukwenza Machine - China nke Series Sand Ukwenza Machine Supplier,Factory -PYM
Ama-VSI Series Sand Make Machines abukhali ekwenzeni isihlabathi nokubumba okwakhiwe kusisekelo sezobuchwepheshe kusuka kuMetso. Ungumshini omuhle kakhulu kuzinkomba ezahlukahlukene zobuchwepheshe njengokuphepha, umthamo, isilinganiso somkhiqizo, umkhiqizo ukushiyana kwezidalwa, ukwakheka komkhiqizo nezingxenye zezindleko.
Nke Series Sand Making Machine ubizwa nangokuthi nke kushaft mpo umthelela crusher, isetshenziswa kabanzi ekwakhiweni, ores yezimboni, imikhando metallic futhi impahla kabusha izimboni kanye ingasetshenziswa kwasani naphakathi kanzima futhi extra izinto kanzima.
Ama-crushers e-VSI asebenzisa indlela ehlukile efaka i-rotor yejubane elikhulu enamathiphu wokumelana nokugcotshwa kwegumbi lokuchoboza eliklanyelwe \_ 'ukuphonsa \_' itshe ngokumelene. Ama-VSI crushers asebenzisa i-velocity esikhundleni se-force force njengamandla amakhulu okubulala idwala. Isimo sayo semvelo, idwala linendawo evulekile futhi engalingani. Kusetshenziswa amandla engaphezulu (ingcindezi) kuholela izinhlayiya ezingaba khona nezingenakubikwa.
1. Ifakwe ngamadivayisi okuphepha awanele nezindlela ezisebenziseka kalula, ezithuthukisa kakhulu ukuphepha nokusebenziseka kalula
2. Ifakwe ngemikhiqizo eyaziwayo emhlabeni jikelele yezingxenye ezibucayi ezifana nokuthwala nezimoto, okwenza ngcono kakhulu ukuqina nokusebenza kwamalungiselelo.
3. Umthamo ophakeme kanye nomumo womkhiqizo ongcono
4. Amakamelo amabili wokukhetha ngokuya ngezakhiwo ezibonakalayo
5. Ukonga Amandla, kuyabiza kakhulu futhi kunobungane bemvelo
Ukujikeleza isivinini (r / imizuzu)